Inguqulelo yesithathu yophuhliso lwe-GIMP 3.0 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Kukhutshwe ingxelo entsha ye-GIMP 2.99.6 apho ukukhula kokusebenza kwesebe elizinzileyo le-GIMP 3.0 kuyaqhubeka.
Kuye Utshintshele kwiGTK3Wongeze i Inkxaso esemgangathweni yeWayland kunye neHiDPI, ikhowudi yesiseko yacocwa kakhulu, i-API entsha yacetyiswa ukuphuhliswa kweplagin, Ukunikezelwa kwe-caching kuphunyeziwe, inkxaso yokukhetha iindawo ezininzi (ukhetho oluninzi) lwongezwa, kunye nokuhlelwa kwindawo yombala yoqobo kwanikezelwa.
1 I-GIMP 2.99.6 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
I-GIMP 2.99.6 Iimpawu eziNtsha eziPhambili
Kule nguqulelo intsha yophuhliso ibonisiweyo, sinokufumanisa ukuba kwifayile ye- izixhobo zokuhlela ngaphandle kwe-canvas ukukwazi ukubeka izikhokelo ngaphandle kwe-canvas kuyenziwa, enokuba luncedo kwiimeko apho ubungakanani be-tovas obukhethwe ekuqaleni abonelanga. Ngokubhekisele kwisakhono esibonelelwe ngaphambili sokususa isikhokelo ngokusisusa kwiseyile, le ndlela yokuziphatha iye yatshintsha kancinci, kwaye endaweni yemida yokubamba, ukuyisusa, kuya kufuneka ngoku ususe isikhokelo ngaphandle kwendawo ebonakalayo.
Kwidayalog ukuseta ubungakanani be-canvas, amandla ongezelelweyo okukhetha iitemplate ezichazwe kwangaphambili Echaza ubungakanani obuqhelekileyo obuhambelana neefomathi zephepha eliqhelekileyo (A1, A2, A3, njl.). Ubungakanani bubalwa ngokobungakanani bobukhulu, kuthathelwa ingqalelo i-DPI ekhethiweyo. Ukuba, xa utshintsha ubungakanani be-canvas, i-DPI yetemplate kunye nomfanekiso wangoku wahlukile, uya kuyalelwa ukuba utshintshe i-DPI yomfanekiso okanye ulinganise itemplate ukuze itshatise i-DPI yomfanekiso.
Inkxaso eyongeziweyo yokulinganisa i-canvas usebenzisa isenzo se-pinch kwiiphedi zokuchukumisa kwaye uchukumise izikrini. Ukucofa ukukala ukuza kuthi ga ngoku kusebenza kuphela kwimimandla esekwe eWayland, kwiindibano zeX11 eli nqaku liza kubonakala kwiinyanga ezimbalwa ezizayo emva kokuba isiziba esifunekayo senziwe kwi-X Server.
Ukuphucula isixhobo sokukhetha sepeyinti Ukukhetha ngokuthe ngcembe indawo enemivimbo erhabaxa. Isixhobo sisekwe ekusetyenzisweni kwezahlulo ezikhethiweyo zealgorithm (igrafikhi) ukukhetha kuphela indawo yomdla. Ukhetho ngoku luthathela ingqalelo indawo ebonakalayo, ekuvumela ukuba ukhawuleze ngokubonakalayo ekusebenzeni xa usanda.
Yongeze iplagi ukuvelisa umbala we-ICC kwiprofayili esekwe kwi-gAMA kunye ne-cHRM metadata ebethelelwe kumfanekiso we-PNG, ichaza ukulungiswa kwe-gamma kunye neparameters ze-chroma. Lo msebenzi ukuvumela ukuba ujonge ngokuchanekileyo kwaye uhlele imifanekiso yePNG ebonelelwe nge-gAMA kunye ne-cHRM kwi-GIMP.
Ukuphunyezwa okungafaniyo kweplagin kucetyisiwe ukudala izikrini. Ukuthi ngqo, ukhetho longeziwe olusebenzisa iiFededesktop portals ukwenza ii-skrini kwindawo esekwe eWayland kunye nokusebenza kwiiphakheji zeplppak ezisebenzisa ukwahlulwa kwesicelo.
Kule iplagi, ingcinga yokudala umfanekiso-skrini ishukunyiselwa kwicala le-portal, ethi yona emva koko yenze incoko yababini kwiiparameter zomxholo othinjiweyo, ngaphandle kokubonisa ingxoxo endala ye-GIMP.
Ngokuzenzekela, Uluhlu lwezinto zoyilo lubonelelwe, njengoko i-GIMP ngoku ixhasa ukhetho olukhethiweyo.
Umsebenzi wenziwe ukudibanisa amagama omsebenzi, kunye nokubanakho ukugcina kunye nokufikelela kwidatha eyongezelelweyo eqhotyoshelwe kumfanekiso we-GIMP, umaleko, okanye umzekelo onikiweyo, ukuvumela iplagi-in ukuba igcine idatha yedatha yokubambisa phakathi kokuqalisa kwakhona.
Iplagi yokuThumela ngaphandle ye-TIFF ibonelela ngokugcinwa kweprofayili yombala kunye neenkcazo kulwahlulo ngalunye lomfanekiso.
Ukusebenza kwakhona kwe-API yophuhliso lweplagi kuyaqhubeka.
Imigca embalwa yekhowudi ngoku yanele ukuvelisa iingxoxo zeGTK.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Imizobo » Inguqulelo yesithathu yophuhliso lwe-GIMP 3.0 sele ikhutshiwe